Ajụjụ ọnụ a South Africa. Ma enwere mgbanwe na - atụghị anya ya n'etiti ajụjụ ọnụ a - 1aviagem.com
Gara aga post: Ndi Knights Templar Nwere?
Nkwupụta ọzọ: Olee otu anyị ga - esi merie agha ụwa nke atọ? Azịza ya nwere ike ịdị n'akụkụ gị.
Edebere 2 January 2020 site Römulo Lucena
Anyị nọ na bọs dị n’agbata Johannesburg na Durbain.
Tupu m bido, m kwesịrị ikwu na a gbara ajụjụ ọnụ kpamkpam. Anyị enweghị oge iji chee maka edemede ya naanị jiri ike ya mee ya. Na ntụnye nke Lexiegh. Ọ chọrọ ihe ezigbo! Zọ kachasị mma ime nke ahụ ga - abụ ime ya dịka nke a, maka ekwentị iji dee ma ọ bụ ya. Lexiegh bụ onye dị ebube m zutere na bọs 7 awa ụgbọ ala na taya dị larịị na South Africa Anyị na-ekerịta ọtụtụ ọhụụ na ọnọdụ ebe anyị mechara nweta ibe anyị. Otu a ka amụrụ na enyi dị n'etiti onye Brazil na South Africa. Can nwere ike ịhụ vidiyo izizi na njedebe nke post a.
Dịka ọ dị na mbụ na blọọgụ a, aga m acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na okwu ahụ na Lexiegh acha ọbara ọbara. Na-enweghị ọzọ ado ka anyị gaa ajụjụ ọnụ!
Romulus: Mu na Lexiegh no
- Anyị zutere na bọs si Joburg (Johannesburg) ruo Durbain anyị ga-aga ajụjụ ọnụ banyere South Africa. ajụjụ nke mbụ:
- Adị m njikere, bia
- Lexiegh, kedu ihe ị chere maka obodo gị? Ọ bụ ezigbo ebe obibi, ihe ga-aka mma, kedụ gọọmentị? Stuff dị ka nke ahụ.
"Echere m na ọ bụ ebe dị mma ịnọ, mana echekwara m na, dịka ihe ọ bụla ọzọ na ndụ, enwere ohere maka mmelite. Yabụ ọ bụrụ n'ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị, ọdịbendị, okpukperechi, ịkpa ókè agbụrụ, enwere ohere maka imeziwanye. Mana m hụrụ n’anya ebe amụrụ m ma jiri ya kpọrọ ihe.
- Ezigbo mma. Ndị mmadụ na-abịakwa South Africa ebe a…
- Kedu otu ị mere?
- Ee, dịka m, buru ụzọ maka njem, ime nyocha, hụ ụmụ anụmanụ (na safari) na ihe ndị ọzọ. Mana ekwere m na South Africa gafere nke ahụ. Ya mere, m ga-achọ ịma echiche gị gbasara Elekere na isiokwu ndị ọzọ metụtara ya. Ndo…
Ee e, mba, ọ dị mma. Ọ dị mma, anyị nwere echiche na ndị mmadụ sitere na mba ndị ọzọ ma ọ bụ kọntinenti ndị ọzọ, mgbe ha chere South Africa, chee maka ụmụ anụmanụ na-aga n'okporo ụzọ. Ha echeghị na South Africa bụ ọkaibe zuru oke, ma ọ bụ na -emekarị ihe na steeti ụfọdụ. Mana anaghị m ata ha ụta maka na ha enweghị ụdị ozi ahụ. Ego ole ka South Africa amaala.
Yabụ laghachi n'ihe gbasara ịkpa iche, enwere otu nsogbu ebe a (nkọwahie). Echere m na anyị abịala ogologo ụzọ, dịka anyị nwere ndị South Africa kemgbe akpọpụtara Nelson Mandela n'ụlọ mkpọrọ. Ma ghara imegwara megide gọọmentị South Africa. Ma nke a bụ oge gara aga. Ya mere, a na-agwọ ọnya a.
Achọghị m ịgha ụgha na ikwu, anyị erute ebe ahụ, mana anyị na-aga.
- Nnọọ nke ọma. Ya mere ekwere m na ọ na-akawanye mma, nri ?!
- Ee, anyị na-aga n’ụzọ.
"Ọ dị mma, gịnị ga-abụ ebe kacha amasị gị na South Africa?"
- beachsọ osimiri! Kwesighi imecha iju! Beachsọ mmiri bụ ebe kachasị amasị m!
"Ma osimiri dị na Cape Town, ma ọ bụ Durbain, olee osimiri?"
- beachsọ mmiri dị na Durbain! Ọ dịghị ka osimiri ọ bụla ọzọ. Ọ nwekwara ihu igwe dị mma. Ihe anyị ga na - eme ugbu a (Disemba). Know mara, ọbụghị naanị oke osimiri n’onwe m. Mana anyị kwenyere (ndị isi ojii) na n’adịghị ka ọdọ mmiri a na-egwu mmiri n’osimiri mgbe ebili mmiri na-abịa gafee ahụ gị. Ha na-ewepụ nsogbu ọ bụla ị nwere: mmetụta uche, nke uche, nke anụ ahụ, ebili mmiri na-ewepụ. Ọ bụ ụzọ iji kwụsị ya. Nke ahụ bụkwa ihe m kwenyere.
- N'ebe ahụ na Brazil, anyị nwere ihe yiri ya ... ọ bụghị nke ahụ, ọ bụghị miri emi ihe ọ pụtara. Mana ndị kwenyere na Yemanja na mbido afọ na-amali ebili mmiri asaa ma tufuo ifuru. Ha na-ekwu na ọ bụ ụzọ iji kwenye afọ ọhụrụ.
- Ee, ọ bụ otu a ka ikwuru ya, ọ bụghị nke miri emi…
- Kedu ihe ị chere maka nkewa a dị n'etiti ojii na ọcha?
- Akpọrọ m ya asị!
- M kpọrọ ya asị!
"You bụ ihe akaebe nke ahụ!" N'agbanyeghị, njem ụgbọ ala anyị niile bụ nke ịkpa oke agbụrụ. Onwe m akwadoghị ya. Echeghị m na onye ọ bụla kwesịrị ibu ụzọ nanị n'ihi na ha bụ ndị ọcha, ndị India, ndị ojii, ndịiche, ma ọ bụ ihe ọ bụla. Maka na ọ bụrụ na ị gbu ndị mmadụ, ha ga-agba otu ụzọ. Echere m na anyị kwesịrị ịna-emeso ndị mmadụ otú ha ga-achọ ka e si mesoo ha. N'agbanyeghị agba akpụkpọ ahụ. Enwere m ike ịdị gị mma, ọ bụrụgodi na ịdịghị m mma. Enwere uche na South Africa, obughi onye obula, kama obu ndi mmadu. Ha chere na e kwesịrị imegwara ha ihe. Ndi mmadu a ka nokwa iche na uche ha. Ndị ọzọ na-eche, "Adị m mma karịa gị, n'ihi na adị m ọcha." Ha ezighi ezi.
Ọ ga-amasị m ka anyị na-ahụ onwe anyị dị ka ndị mmadụ. Ndị ahụ bikọrịtara ọnụ nke ọma. Dị ka mụ na gị!
Na iji kwado azịza a, echere m na imeso ndị mmadụ n ’n'agbanyeghị ụcha ha bụ ihe ga-eme ka anyị too ka mmadụ, iji mee ka ụwa ka mma.
- Okoro, ma ọ bụrụ na ị na-elele nke a… Ezutere m nwoke a TAA!
Na ebe a bụ ihe atụ nke ihe anyị na-ekwu ebe a.
M zutere ya taa, mana ọ dị m ka ọ bụ ezigbo mmadụ, na-emekọ ihe ọnụ, ma kemgbe ahụ anyị na-emezi ya, na-emekọrịta ihe. Ahụrụ m ike ya na echiche ... Ọ bụ onye m ga-ebi.
- Otu ahụ ahụkwara m ike ya na ... kemgbe ahụ, anyị na-emekọ ihe ọnụ iji gafere ihe mgbochi ndị a n'etiti ndị isi ojii na ndị ọcha. Anyị karịrị nke ahụ.
Ihe atụ: anyị nwara ime ka Uber bia ebe a, mana ngwa ahụ arụghị ọrụ. Ha wee nwaa ịkwụ ụgwọ ihe karịrị okpukpu abụọ nke ọnụahịa ahụ, naanị n'ihi na ya na ndị ọcha nọ.
- Ee ha chere, "ọ dị ọcha, yabụ na o nwere ego".
"Ọ bụ mgbe ọ kọwaara m ọnọdụ ahụ, achọghị m ikwere." Mana ngwa ahụ laghachiri ọrụ ma ọnụ ahịa gbagoro, ọ dịkwa obere karịa ihe ha chọrọ iji bo anyị ebubo. Echere m na na South Africa (na Brazil kwa) mkpa ka emeziwanye. Ọ bụ mgbe ahụ ka m matara na ihe Mandela bidoro dị mma, mana ma ọdịbeghị mma.
- Ee e, ọ bụghị.
"Ma ndị Brazil, ọ bụrụ na ị bịara South Africa, zụta kaadị data n'ebe a." N'ihi na ị nweghị Wifi ebe ọ bụla.
“Anyị ga-agbadata ma gbagoro na ọdụ ụgbọ ala Durbain. Naanị maka nke ahụ. Mana lee, anyị na-eri nri abalị ugbu a! Mụ na onye m zutere taa nwere nri abalị!
"Anyị nọ ebe a nanị n'ihi na anyị bụ ndị enyi, n'ihi na anyị anaghị ahụ ndịrịta iche a, na mmadụ kwesịrị ịdị iche na agba n'ihi agba."
-,, ị mara mma nke ukwuu mgbe ị na-amụmụ ọnụ ọchị! Ah ugbu a ọ na-agbaze.
- Lee, ọ bụ ya mere na ọ jọrọ njọ ịcha ọcha, maka na ị ga-acha ọbara ọbara! Anyị bụ mmadụ.
- Ma ị bụ! Ọ bụrụ na mmadụ tiri gị ihe, ị ga-enweta isi awọ, odo odo ...
- Ma oburu na anyi arria oria, anyi na acha odo odo.
- N’ime anyị ị ga-eme ihere, ị nwere ike ịrịa ọrịa, ịnwere ike iti gị ihe… anaghị agbanwe agbanwe, anyị nwere otu agba. Anyị nwere mmasị na ya ma nwee ekele maka ya n'ihi na ọ bụ otú anyị dị.
Ka anyi gbanwee ajuju a!
- Chere, ka m dozie ntutu m.
- Oh na n’oge njem ha nyere m aha otutu na bọs. Ha kpọrọ m Jọn, n'ihi na "Romulus" buru oke ibu karịa ha.
"Ọ bụ eziokwu, ọ bụ Mr. H ma ọ bụ John. Romulus buru nnukwu ibu."
Ọ dị mma, mana ka m jụọ gị ajụjụ ugbu a. Gwa ha eziokwu. Kedu ihe ị maara gbasara South Africa? Asim, I ghaghi ebe a n'efu. Ọ ga-abụrịrị na ịchọrọ ịhụ ihe.
"Ọ dị mma, ihe m matara gbasara Saụt Afrịka bụ naanị ihe aha mmado kwuru." Nke bụ mba nwere ọtụtụ ụdị nri mmiri na osisi ama. Ebe ị nwere oke ohia, ebe ị nwere ike ịga na safari, mana gbanwee site na ngwa agha gaa na igwefoto. M na-ekwu, ọ bụghị a na-achụ nta safari kama ọ bụ a safari foto. Na Nke ahụ agabiga. Nke ahụ bụ ihe m chere ruo mgbe m bịara ebe a. Nakwa na Nelson Mandela bụ ezigbo onye ndu ma were South Africa gaa n'ọkwa ọzọ.
Ma mgbe m rutere ebe a, echeghị m ọzọ… Echere m na ọ nwere ọtụtụ ọrụ na Brazil. N'ebe ahụ, anyị na-anwa ịgbanwe, imeghari… Ma ihe kacha amasị m na South Africa bụ n'ikuku. Ndị South Africa na-anabata gị, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọcha dị ka m. Ha na-ejikwa ezigbo ike eme ihe ha na-eme. Ọ bụghị mba niile nwere ya. Iji maa atụ, ọ bụrụ n’ị gaa mba ụfọdụ na Europe obere oyi Na Brazil, ha na-ebikọ ọnụ, jiri ihe ọ bụla na-eme ihe ọchị. Ma elee anya otu a.
- Anyị hụrụ njakịrị n'anya?!
Naanị otu ajụjụ ọzọ anyị mere.
- Oh chi m!
“Can't gaghị agali gbaa ndị mmadụ ajụjụ ọnụ ebe niile ma chee na ọ nweghị onye ga-agba gị ajụjụ ọnụ. Aga m agba gị ajụjụ ọnụ ugbu a!
- Ma adịghị m njikere maka nke ahụ. Agbanyeghị, ghaa, ka anyị mee nke a.
- Ee a ama m na ị gaghị adị ma ọlị. Mana nke ahụ bụ ụzọ m bụ isi.
Ọ dị mma, ọ bụrụ n’ịgbanwe otu ihe n’ụwa niile, n’agbanyeghi ebe i si bia ma ọ bụ ebe ị nọ, gịnị ka ị ga-agbanwe?
- Echere m na m ga - agbanwe okwukwe ndị mmadụ…
Ekwere m na mmadụ niile ga-enwerịrị okwukwe na ihe. Na Chukwu ma obu n’onye… n’ihi na inwe okwukwe odi nkpa.
Ọ bụrụ na mmadụ enweghị okwukwe na ihe ọ bụla, ọ nwere ike ibibi ya. O nwere ike daa mba n’obi, ma obu gbuo onwe ya… n’ihi enweghị nkwenye. Yabụ ọ bụrụ na m nwere ike ịgbanwe otu ihe n’ụwa, aga m enwe okwukwe na ya.
- N’ihi gịnị? ee, ama m na ị kọwaworị ya, mana ọ dị m ka anyị erubeteghị obi John. Gịnị mere i jiri sị na ị ga-enwe okwukwe na mmadụ niile? Ọ dị mma, mgbe ahụ ka m ga-aza ajụjụ ikpeazụ ahụ, anyị emechaala.
Ọ bụ n’ihi na mgbe ị nwere okwukwe n’ihe, ma ọ bụ kwere na mmadụ, ị nwere ihe mere ị ga-eji dị ndụ.
- Oh, nke ahụ miri emi nke ukwuu!
- Mana ọ bụ eziokwu! Achọghị m ịma ma ọ bụrụ na ikwere na Chukwu, Allah, Buddha… ọ bụghị ya. M na-ekwu banyere ụdị okwukwe ọzọ. Ọ bụrụ n ’ị rọrọ nrọ ị ga-emezu, ezinaụlọ iji mee ka ọ dị n’otu, ma ọ bụ nwee ike nwatakịrị na-eto eto, mgbe ahụ ị ga-enwe ezigbo ihe mere ị ga-eji dị ndụ.
- Odi nma, ugbua aga m aza otu ajuju. Kedu ihe m ga-agbanwe n’ụwa?
… Ọ ga-abụ ụzọ anyị si ahụ ndị ọzọ.
- Ma m kwesịrị ịjụ, gịnị kpatara ya?
- N'ihi na ozugbo ị chọpụtara na onye nke ọzọ adịghị ike dịka gị, na onye ahụ chọrọ ịhụnanya, nkwanye ugwu dịka ịchọrọ, mgbe ahụ ị ga - akwụsị ile agba onye ahụ anya wee malite ịchọpụta mma. Na usoro ndị mmadụ, n'ogo ụwa. Ihe banyere igbanwe okwukwe ndi mmadu n’ime ihe, aga m enwe okwukwe n’inyi. Lovehụnanya na-agwọkwa ihe niile. Anọwo m na ebe siri ike ikwu banyere akụkụ mmetụta uche, nke achọrọ m okwukwe iji merie. Ọ bụrụ n’onweghị m na ikike dị elu agaraghị esi na ya pụọ. Nke a bụ ihe dọpụtara m. Ma taa m nwere ike ịsị: Adị m ndụ.
- Ee, otu a ka m nwere ike isi kwuo… agaala m n'ebe dị omimi, na nsogbu siri ike maka m. Enwere ike ndị ọzọ na ọ bụ nzuzu, mana nye m, ha bụ ihe enweghị atụ. Okwukwe bụkwa ihe mere m ji too ma mee ka m si ebe ahụ pụọ. Ọ dị ka onye na-agwa m: Hey, ị ka nwere ihe mere ị ga - eji gaa n'ihu, ka ị dị ndụ, pụọ n'olulu ahụ.
- Ma ọ bụ ya! Ma ọ bụ ya (n'otu oge)
Guysmụ nwoke, ọ bụrụ n’ị na-ele nke a, biko mara na ọ dịghị ihe dị elu karịa ịhụnanya, karịa nsọpụrụ, na ọ nweghị ihe dị mma karịa ịmara "Jonh"! 😆
- Ah, aga m enye gị mmakụ! N'ihi na nke a bụ ihe ndị Brazil na-eme! haha 😆
Ọ dị mma, ọ bụrụ na ajụjụ a mere gị ọhụụ. Biko soro anyị ebe a. Naanị site email gị na bọtịnụ uhie. A mmakọ onye ọ bụla na ruo ọzọ post. 😎👉
Ajụjụ ọnụ apartheid South Africa Durbain Ajụjụ ọnụ Johanesburg John Nelson Mandela South Africa